Fabulously indawo enhle - Mariana qoqo leziqhingi - esisogwini entshonalanga "emaphethelweni" ezimbili kuyiPacific Ocean. Zonke abaye nakuleli pharadesi, kuphawula inhlanganisela yimpumelelo ngokungavamile bemvelo ezingavamile, isiko Micronesian kanye nentando yeningi American, okuyinto ndawonye ukudala yokuphila ehlukile nokungcebeleka, lapho ufuna uhlale kuze kube phakade.
Mariana qoqo leziqhingi
Ngokuvamile, le ngxenye ezimbili kuyiPacific Ocean ingena Encwadi Guinness. Lapha, ngokwesibonelo, owethulwa esigodini ejulile emhlabeni - Mariana. Itholakala eduze ngokushesha endaweni lapho Unai, isiqhingi esikhulu kunazo zonke futhi inhloko-dolobha zonke kuleli qoqo leziqhingi.
Kwaze kwaba sekhulwini lama-20, le ndawo yayaziwa ngokuthi isiqhingi Ladronskie kulelo "zwe amasela" kusho ngeSpanishi. Bahlanganisa 15 iziqhingi kahle esikhulu futhi kancane kancane akha insimu 2 - Guam naseNorthern Mariana Islands, eziyingxenye US Commonwealth izindawo.
Mariana qoqo leziqhingi kuyinto arc, eseningizimu ye okuyinto amadala (iminyaka eyizigidi ezingu-20), okubandakanya Guam, Unai, Rota, futhi Tinian Aguigan. Lawa izinsalela lasendulo izixhobo zamakhorali, okuyinto ngaphezu kwesikhathi esisodwa isikhathi eside kangaka kokuphuma futhi awela phansi.
Umbuso wasenyakatho ingxenye mlilo futhi ngaphezulu "abasha", futhi izintaba-mlilo 50 nje ngaphansi kwamanzi kanye 11 kule ndawo zonke kuleli qoqo leziqhingi - kuyinto Iziqhingi.
Namuhla, izivakashi eziningi zithanda ukuvakashela iningi iziqhingi ezinkulu uhambo ezihlasela lezi ziqhingi njalo, waphetha uhambo lapho kukhona Unai. Izixhumanisi isiqhingi - 15 ° 11'06 "nge. w. 145 ° 44'28 "a. . Ngo-uhambo efanayo kuhlanganisa Guam, Rota, Tinian Aguigan futhi lokhu lapho ezokuvakasha amaningi futhi enhle kunazo coral.
Okwatholwa yisayensi yemivubukulo kusikisela ukuthi lapho kukhona Unai, abantu babehlala 2000 BC. e. Lawa kwakungamadodana abantu kusukela eningizimu-mpumalanga ye-Asia, lapho isikhathi esithile kamuva salandelwa esizweni Chamorro. Babefanele wokwehlayo zabo zenhlalo, oyinhloko we besifazane babengoFakazi. Yini ezithakazelisayo, ngisho bamakoloni kuhlulekile onamabala matriarchy, nakuba beye Uzame kusukela ngekhulu le-16 futhi wonke umuntu ephoqeleka AboMdabu inkolo yabo.
igama abathandwayo - "amasela Isiqhingi" - wathola Guam, abantu bendawo ezaziphanga omunye imikhumbi Magellan, usebenzisa yokuthi amatilosi bekhathele ngemva kohambo oluyingqopha-eside kangaka ngokushesha yabe seyaziwa ngokuthi lonke leli qoqo leziqhingi Ngakho Chamorro bajwayelana baseYurophu ...
Kusukela engxenyeni yokuqala yekhulu le-16, isiqhingi lidlule isuka kwesinye isandla iye, okuyinto eyangithinta elonakalisayo bendawo. Ngokwesibonelo, ikoloni Spanish we inombolo ukuncipha Chamorro kusuka 1521 kuze kube maphakathi nekhulu le-18, kusukela ku-150 000 kuya ku-5 000 abantu. Vele 2 eminyaka cishe yonke abomdabu basezifundeni Mariana Islands baqothulwa impi kanye nesifo.
Ekupheleni kwekhulu le-19, Spain wayenike engxenyeni lapho kukhona Unai, e-United States ngo-isivumelwano sokuthula, futhi enyakatho ingxenye zonke kuleli qoqo leziqhingi edayiswa eJalimane.
Ngemva kweMpi Yezwe Yokuqala, isiqhingi zabuswa Japanese, kodwa US linqotshiwe ngo-1944. Kuyinto kusukela kule izindiza wakhumula kusukela amabhomu e-athomu ebhodini, amakilasi ezifundo Nagasaki naseHiroshima. Kusukela ngonyaka ka-1978, e-Saipan (lapho ayekhona kabani indawo, okukhulunywe ngaye ngenhla) yaba inhloko-dolobha ye-Northern Mariana Islands futhi Guam, kanye wathola isimo ensimini unincorporated ihlelwe USA.
Lokho kukhona Unai (Isiqhingi), lapho Mariana Trench. uhlangothi zakhona ezisempumalanga ke seliya kuwo. Yena elixutshwe imvelaphi coral kanye mlilo, okuyinto kudala izimo ezikahle ukuze zisetshenziselwe ezokuvakasha. Ngakho, ingxenye yayo entshonalanga naseningizimu - a amabhishi langa sandy nge ichibi elikhulu ezakhiwe zamakhorali, kanye nezinto empumalanga - amabhange emaweni. A amakhilomitha ambalwa ukuba bafike iqala Mariana Trench, ukujula ka okuyinto engaphezu kwengu-11 000 m. Akukhona kudala, ososayensi bathola izinto, indawo salo 400 000 km 2, futhi ezansi kukhona izintaba ezine, ngasinye zazo ifinyelela ukuphakama 2.5 km.
On Unai babe ongaphakeme Tapochau Intaba (474 m), okuyinto, Isimanga siwukuthi, akuyona ukuqhuma kwezintaba-mlilo, namathempeli ngokhonkolo namatshe.
Unai - Isiqhingi (Unai ngesiNgisi), okuyinto Isiza labo abathanda imisebenzi yangaphandle. Isimo sezulu enhle, okuyilona elisebenzayo futhi afakwe i-Guinness Book sibonga lokushisa njalo nsuku zonke 27 degrees unyaka wonke, ukudala kwezimo ezifanele diving, Trekking futhi snorkel.
Ngokwesibonelo, e-Saipan - isiqhingi lapho kukhona yesibili emhlabeni ilandela i-ubuhle emhumeni kwamanzi - sivale indlela engena emgedeni. Ngakho wanquma yijaji ekhethekile, eyayihlanganisa diving ochwepheshe. Budebuduze ngemva kwakhe futhi Manyagaha esiqhingini elise echwebeni Unai. Le ndawo amanzi emhlabeni kuyaqapheleka njengoba 4th emhlabeni ibe yindawo engcono snorkel.
Lagoon Isiqhingi futhi kufakwe i-Guinness Book, njengoba kwakunjalo lapha ngo-1999, wenza dive kanyekanye abantu 215.
Izikhangibavakashi Unai (Mariana Islands) kufanele ezemvelo nezibangelwa abantu ezenziwe.
Lo mqeqeshi owake wapheka zibizwa ngenhla futhi sivale indlela engena emgedeni Umgede Manyagaha futhi banzai Cliff etshela izintatheli. Kuyinto eweni ohlangothini olusenyakatho lwalesi siqhingi. Igama akuyona ngephutha, ngoba kulapha lapho waphonseka abasindile ulwandle yezimpi ne-Japanese baseMelika - amasosha kanye bendawo.
Intaba Tapochau odumile kungasho neze kuphela panorama amahle yalesi siqhingi, okuyinto njengoba kuvulwe, kodwa isithombe kaJesu Kristu.
Abathandwayo qoqo leziqhingi izivakashi bazovakashela engadini Botanical, lapho ungakwazi ukucabanga njengoba 2 000 zezitshalo exotic iguanas oluhlaza nezibankwa ezishisayo.
Museum of History namasiko ziphephile, etshela ngokuphila esiqhingini kusukela ezinsukwini zasendulo esizweni Chamorro kwaze kwagqashuka iMpi Yezwe II.
American Memorial Park siyindawo hhayi kuphela inkumbulo lababuleweyo izimpi kulezi izingxenye amasosha aseMelika, kodwa futhi ukuzijabulisa.
Lapha ungakwazi ukudlala ithenisi, ukugijima, windsurfing noma diving.
Mariana qoqo leziqhingi, lapho Unai - ipharadesi ngezifo nezinhlungu snorkel abathanda. At onawo zabo akuzona enhle kuphela emhlabeni izixhobo zamakhorali, kodwa futhi eziningi imikhumbi , futhi ezindizeni.
Ayikho ezithakazelisayo kancane ukukhombisa lezi zindawo inotho abazingeli. Kwethulwa ngesikhathi Museum of History Namasiko imikhiqizo igolide nakuba iqoqo ingcebo lushone galleons Spanish esikhulu kunazo zonke emhlabeni, amelela ingxenye encane nje kuphela lokho okwakulungile uyakwazi ukuvezela kusukela phansi olwandle.
Abadobi futhi ngeke be bored. Barracuda, Dorado, Marlin eside elinekhala, tuna enesisindo esingamakhilogremu angaphezu 100 kg - lena kuphela ingxenye encane uhlu izinhlanzi ezakha catch. Ngokwesibonelo, kulapha-swordfish uthathekile, okuyinto isisindo kwaba ngu-450 kg.
Gourments kufanele nakanjani ukuza Unai. Lapha basuke elinde zokudla ne-Chinese, isiJapane, isiFulentshi, cuisine American futhi Italian. ethandwa kakhulu izitsha ezahlukene izinhlanzi, kakhukhunathi isobho nge imifino umhluzi ne inyama nengulube notamatisi.
Myasoedov alindele yenkomo nemvu izimbambo ne sauce yonke ukunambitheka. Endaweni kakhukhunathi iwayini kufanele azame ukuze wazi ukuthi tube, kodwa kufanele uzilungiselele ukuthi ijusi isibilile ka ukhukhunathi abasha kunobuciko ehlukile.
Obninsk: labantu, isimo sezulu, umlando
Gagra resort: emabhishi Gagra ezintsha nezindala
Barrow: "Iziphethu Kwezwe". Spa-sauna nge ingaphakathi esiyingqayizivele
Izingubo iziphanyeko, ukhuni - design ingaphakathi yanoma iluphi kanye nomklamo
Ihhotela Fiesta Ihhotela Playa Paraiso
Umshini i imimese chain. incazelo
Izilenge ekhoneni SOFAS: kusukela lula ukuba okunethezeka
Inhalation ku itheku. ziphathwa ekhaya
Sitolo sekudla lokuphekiwe - Iyini? Umlando kanye nezinhlobo zokudla
Nenzuzo sekukonke: ifomula ukubala
Neurosurgery - Yini lokhu?